Momba anay - NINGBO BOLT MACHINERY electronical & TECHNOLOGY CO., Ltd
Ny orinasa anay, NINGBO BOLT MACHINERY electronical & TECHNOLOGY CO., Ltd dia mpanamboatra matihanina any Sina izay manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana airbrush, mini air Compressors, basy fitam-basy, kitapom-drivotra sy fitaovana fanaovana rivotra.
Ao anatin'ny 1500 mahery ny traikefa amin'ity zotra ity, fanondranana manerana izao tontolo izao izahay.
Ny orinasa dia mandrakotra tanànan'ny tany 20000,, ahitana mpiasa matihanina miaraka amin'ny famokarana mivoatra ary fitaovana fanandramana mahafinaritra. Manome ny kalitao avo lenta isika amin'ny vidiny mifaninana sy serivisy serivisy.
Miisa 88 ireo mpiasa ao amin'ny orinasa ataontsika, ny fanjakantsika dia 30,000 ny rafitra fandrafetana sy fantsom-borona 50,000pcs ary 30000pcs ny fanamafisam-peo an'habakabaka mini.
Ny orinasa ao amin'ny tanàna an-dranomasina malaza - Ningbo. Ny vokatra avy dia ankatoavina amin'ny fitsipiky ny CE & GS ary mahazo patanty vokatra be dia be. Ny vokarintsika dia mety tsara amin'ny fantsom-panafody Airbrush, tatoazy, make-up, t-shirt airbrush, famolavolana zavakanto, fanaparitahana doka, sy ny sisa.
NO.289 DONGJIANG LOHATENY Vaovao HI-TECH, FENGHUA, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA